သံဓါတ်ပြည့်ဝခြင်း အကျိုးကျေးဇူး - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
Iron လို့ခေါ်တဲ့ သံဓါတ်ဟာ သတ္တုဓါတ်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး အဆုတ်မှတစ်ဆင့် အောက်စီဂျင်ကို ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ သယ်ဆောင်ပေးပြီး သွေးနီဥ တည်ဆောက်ရာမှာနဲ့ အခြားသော အရေးကြီးတဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို လုပ်ဆောင်ရာမှာ အဓိကအခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်လုပ်ဆောင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ပုံမှန်ကောင်းမွန် လည်ပတ်နေဖို့ဆိုရင် သံဓါတ်အားကောင်းနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သံဓါတ်ပြည့်ဝနေမှသာ သံဓါတ်ချို့တဲ့ ရောဂါတွေကို ကာကွယ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်နေ့တာအတွက် သံဓါတ်လိုအပ်ချက်ပမာဏ အမျိုးသား- 8 mg နဲ့ အမျိုးသမီး – 18 mg ဖြစ်တာကြောင့် တစ်နေ့တာ စားသုံးတဲ့ အစားအစာထဲမှာ သံဓါတ်ကို လုံလောက်စွာ ထည့်သွင်းစားသောက်သင့်ပါတယ်။ အစားအစာ အပြင် ဖြည့်စွက်စာနဲ့ သံဓါတ်အားဖြည့်ဆေးများကိုလည်း လိုအပ်တဲ့ ပုံမှန်ပမာဏကို ရွေးချယ်သောက်သုံးနိုင်ပါတယ်။
📌သံဓါတ် ပြည့်ဝခြင်း အကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့
4. အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ကောင်းမွန်ခြင်း
5. ဆံပင်ကျွတ် သက်သာခြင်း
6. ခြေသည်း လက်သည်း ကြွပ်ဆပ်မှုမရှိခြင်း
7. နှလုံးတုန် ခြင်းနှင့် ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်းမှ ကင်းဝေးခြင်း
8. သံဓါတ်ချို့တဲ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သော သွေးအားနည်းရောဂါများမှ ကာကွယ်ခြင်း
9. Healthier Pregnancy ကိုရရှိစေခြင်း
10. Muscle endurance ကို improve ဖြစ်စေခြင်း စတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများစွာကို ရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
သံဓါတ်ကို – အမဲသား ဆိတ်သား ဆတ်သားများ-ကန်စွန်းရွက် ဟင်းနုနွယ် ဥနီ နှင့်- သံပုရာ လိမ္မော် နာနတ် အပြင် ဥများ နဲ့ ငါးအမျိုးမျိုးကနေရရှိနိုင်သကဲ့သို့ သံဓါတ်အားဆေး တစ်နေ့တစ်လုံး ပုံမှန် သောက်သုံးပေးခြင်းအားဖြင့်လဲ လိုအပ်တဲ့ သံဓါတ်ကို ရရှိနိူင်ပါတယ်။